WELWELKA LAGA QABO QARAXA MOOBILADA GACANTA OO ISA SOO TARAYSA | Toggaherer's Weblog
Wel welkan ayaa laba kacleeyay kadib markii Shin Min Daily News ee kasoo baxa wadanka China ay dhowaan tebisay in nin u dhashay dalka China uu geeriyooday kadib markii bayteriga mobilkisu uu qarxay taas oo keentay in ninkani uu u dhinto dhaawac soo gaadhay qoortisa.
Dhacadadan ayaa waxa ay tahay tii sagaalad ee nooceeda ah ee ka dhacda dalka China ilaa sanadkii 2002 iyada oo wiil dhalin yaro ah oo la odhan jiray Xiao Jinpeng uu dhintay kadib markii uu qarxay mobilkii uu laabta ku sitay.
Waxaa dhacdayoonkan isa soo taraya ee la xidhiidha mobilada qarxaya ay wel wel ku aboortay shirkadaha waa weyn ee ku caan baxay soo saarista mobilada sida NOKIA iyo Motorola isla markasna waxa ay wel wel ku abuurtay dadkii adeegsanayey mobilada.
Sarkaal sare oo u hadlay shirkada Motorola magaciisan la yidhaahdo Jason Howard ayaa waxaa uu sheegay in waxa qaraxa keenaya uu yahay iyada oo ay dadku ay iib sanayaan bateriyo mac mal ah oo aan ahayn kuwii orijinalka ahaa ee ay shirkaduhu sameeyeen.
Waxaa sarkaalkani uu intaa ku daray in bateriyadani aysan lahayn awood ay dabka ku qaatan taasna ay ugu damaynta keenayso qarax ka dhasha gudaha bateriga.
Waxana uu uga digay dadka in ay iibsadaan bateriyada falsada ah ee naftooda halista gelinaya.
Dhacdadan ayaan ku koobnayn dalka China ee keliya sidoo kale waxaa muddo dhawr sanadood laga joogo magaalada Shariqa ee dalka Imaratka ka dhacay qarax mobil balse qaraxan ayaan geysan qasaare nafeed.